Religion – Chakra Jwala
Posted on 19 Aug 2017 19 Aug 2017 by Chakra Bhandari
डा. स्वामी प्रपन्नाचार्य
फिलिस्तिनलाई छोडेर ईसा जुन बाटो भारतमा पसे त्यसको वर्णन अहमद कादियानीले ‘जिसस इन इण्डिया’ अर्थात् ‘ईसा भारत मे’ भन्ने पुस्तकमा प्रस्ट गरेको छ। एक प्रमाण अरु छ। त्यो यो छ कि काश्मीरमा आज पनि ईसाको समाधि विद्यमान छ।
ईसाभन्दा पहिलो मूसाले चलाएको यहुदी धर्म मानिन्थ्यो। त्यसलाई आज पनि ओल्ड टेस्टामेन्ट अर्थात् नयाँ धर्मशास्त्र भन्छन् तर ईसामसीहको बारेमा उनको १८ वर्षको जीवनीका सम्बन्धमा ईसाई पादरीसँग सोद्धा बोल्न सक्दैनन् कोनि किन हो यसमा सबैभन्दा पहिलो आफ्नो जीवनको अधिकांश भाग महात्मा ईसाको १८ वर्षको जीवन कहाँ बित्यो? त्यस सम्बन्धमा खोज गर्ने रुसी विद्वान् डा. निकोलस् नोटोविचको शोधप्रबन्धलाई अगाडि सार्न सजिलोसँग सकिन्छ। महात्मा ईसा पहिले एमडी साधु थिए। आजभन्दा दुई हजार वर्षपहिले युरोपको कुनै एक प्रान्तमा एमडी नाम गरेको ठाउँमा ‘एस्सेन’ पन्थका मान्छे रहन्थे। त्यहाँबाट हिँडेर भारतमा आइपुगी आफ्नो जीवनको १८ वर्ष भारत खण्डको जम्बूद्वीपमा बिताए। डा. नोटोविचले ४० वर्षसम्म खोज गर्दै तिब्बतको हिमोस बौद्ध लामाहरूको गुम्बा मन्दिरमा पुगी पत्ता लगाए। त्यहाँका लामाहरूले ताडपत्र, भोजपत्र आदिमा लेखिएको ईसाको जीवनचरित्रको सामग्री दिए। यति मात्र होइन अपितु स्वयं ईसाले लेखेको प्रकरण पनि त्यहीँ छ अरे। जसमा भारत भ्रमण गरेको १८ वर्षको यात्रा वर्णन आफैँ ईसाले गरेको छ। ‘हिमोस’ गुम्बामा यो बौद्ध मन्दिरको १४ प्रकरणको २४४ श्लोकमा भएको वर्णनअनुसार ईसा सिन्धु प्रदेशबाट आर्यावर्त पुगीकन केही दिन बौद्ध भएर जगन्नाथपुरी पुगे। अनि ब्राह्मणहरूसँग सनातन वैदिक धर्मको दीक्षा लिएर वेदशास्त्रहरूको अध्ययन ईसाले गरेका थिए। राजगिरी, काशी आदि तीर्थ भ्रमण पनि साधुमहात्माहरूको सँगमा गरे। अनि बौद्ध बिहारमा ६ वर्षसम्म बसेर बौद्ध दीक्षा लिइसकेपछि नेपालको बाटो भएर तिब्बत गए। बौद्ध धर्मसँग मेल खाने अद्भूत समताले गर्दा स्मिथ, विन्टरनीज, इलियट तथा अनेक अरु पनि विद्वान्हरूले यो तथ्यलाई स्वीकार गरेका छन्। यस सम्बन्धमा साधु रामसुखदासको ‘महात्मा ईसा और उन के भारत में दीक्षा’ नामक पुस्तक पनि मनन गर्न योग्य छ। यो किताब काशीबाट प्रकाशित भएको छ। महेन्द्र कुल श्रेष्ठको ‘क्या ईसाका धर्म पहिले भारत में चला?’ अमृत प्र.. २५ डिसेम्बर १९७८को लेखमाला पनि अत्यन्त मनन गर्न योग्य छ। यो लेखमा यो कुरालाई यस रूपमा लेखकले दर्शाएका छन् कि ईसा फिलिस्तानमा सूलीमा मरेको होइन अपितु बाहना पारेर भारत पठाएको कुरा सिद्ध गरे।
डाक्टर जकालियटको ‘इण्डिया इन बाइबल’ ले त केही छोडेको छैन। सबै थोक वेद–शास्त्र–पुराण–गीता–महाभारत–रामायण आदिबाट ईसाको न्यू टेस्टामेन्ट बनेको हो भनेर सिद्ध गर्नुभएको छ। डा. जकालियटको एक विशेषता अरु पनि छ। त्यो यो हो कि अङ्ग्रेजीको प्रायः प्रत्येक शब्द संस्कृत शब्द र धातुहरूबाट बनेको मान्नुहुन्छ। त्यसै भएको हुनाले त्यतिखेरका प्रसिद्ध विद्वान्् मैक्समूलरले ‘यो लेखकले भारतीय ब्राह्मणहरूको जुठो खाएको छ’ भनी नहुँदो आक्षेप पनि लगाए। तर, मैक्समूलरको आक्षेप रिसको पाको भुइँमा उतार्नु मात्रै हो। यस्तै रीतिले डा. नोटोविचको ‘ईसाको अज्ञात जीवन’ भन्ने शोधप्रबन्धका बारेमा पनि मैक्समूलरले नोटोविचलाई पनि तिब्बतका लामाहरूले ठगे भनी ‘नाइन्टिथ सेन्चुरी’ पत्रमा लेखे। तर, त्यतिखेर डा. नोटोविच लण्डनमा थिए। ‘टाइम्स’ पत्रमा विश्वका समस्त पादरीहरूले खुबै खबर लिए। अनि मैक्समूलरको पनि संयुक्तिखण्डन गर्दा फेरि कुनैले पनि कलम उठाएनन्। त्यस्तै प्रकारले डा. जकालियटको भारतमा ‘बाइबिल’ ग्रन्थको पनि मैक्समूलरले आलोचना गर्ने प्रयत्न गरे तर सफल भएनन्। अनि यो ग्रन्थ मूल रोम भाषामा लेखिएको हो। यसको अंग्रेजी अनुवाद लण्डनबाट प्रकाशित छ। तर अंग्रेजी अनुवाद प्रामाणिक छैन। अनुवादकहरूले मिलेर लेखकको अभिप्रायः र प्रमाणिक खोजहरूलाई उडाई आफ्नो तर्फबाट मिलाएर प्रकाशित गरेका छन्। त्यसो हुँदा पन्जाब होसियारपुर निवासी विद्वान् मनस्वी लेखक श्री सन्तराम बी.ए.ले मूल रोम भाषामा लेखेको एक प्रति वीर सावरकरबाट प्राप्त गरेर हिन्दी अनुवाद गरी ‘भारत में बाइबल’ नाम राखी लखनौ नवलकिशोर छापाखानाबाट प्रकाशित गरेको छ। यो मूलको जस्ताको तस्तै प्रामाणिक अनुवाद छ। कलमीलाई रोम, अंग्रेजी र हिन्दी तीनैलाई आँखा मिलाउने सौभाग्य मिल्यो। पी.एन्. ओकको ‘क्रिश्चियनिटी इज कृष्णनीति’ ग्रन्थ पनि पढ्न योग्य छ। सप्रमाण सिद्ध गर्नुभएको छ कि उनीहरूको मान्य धर्मग्रन्थ तौरेत ‘अञ्जील’, ‘बाइबल’ आदिमा पाइने र उनीहरूको मूसाई, रोमन क्याथोलिक, प्रोटेस्टेन्ट, थियासफी आदि सम्प्रदायहरूमा पाइने धेरै जस्तो के खर्लप्प भने पनि हुन्छ हिन्दू आर्यहरूबाटै गएको सप्रमाण सिद्ध गर्नुभएको छ। पण्डित रघुनन्दन शर्मा साहित्यभूषणले पनि ‘वैदिक सम्पत्ति’ को २६३ पृष्ठमा भारतमा आएर ईसाले काशी र विहार आदिमा विद्याध्ययन गरेर तिब्बत जाने कुरा लेखेको छ।
बङ्गविच्छेद आन्दोलनकारी श्री बाबा सावरकरले ‘खि्रस्त परिचय’ ग्रन्थमा यो सिद्ध गर्नुभयो कि हजरत ईसाको जन्म भारतको हिन्दू परिवारमा भएको हो। बाबा सावरकरको युक्तिलाई हटाउन कुनै पादरीले सकेनन् र अन्तमा उपेक्षाभावमा रहन थाले। मेजर विल्फोर्डको पनि यस सम्बन्धमा गतिलो सोधखोज छ। डा. बुकानिनले पनि आफ्नो विचार ईसाको सम्बन्धमा प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। फिलस्मिथको ध्यान पनि ईसाको १८ वर्षको जीवन कहाँ बित्यो होला भन्ने चर्चामा जाँदा उसै ठाउँमा पुग्यो। फ्रान्सिसी यात्री क्वेक्वनियरले पनि ईसाको १८ वर्षको सोधखोज गरेर राम्ररी टुंगो लगाएको छ। भारतमा पादरी भएर बस्ने पादरी गोपालाचार्यले पनि राम्ररी निधिखुदी गरी सावरकरसँग मेल गर्न पुगेका छन्। हिन्दू परिवारमा ईसाले जन्म लिने सम्बन्धमा यस प्रकारले धेरै आधुनिक पाश्चात्य–पौरस्त्य विद्वान्हरूको एकै मतो देखिन्छ। यहाँ उनीहरूका वाक्य प्रमाण उद्धृत गर्दा ग्रन्थ स्वतन्त्र हुन जाने हुनाले कतिपय लेखक र कतिपय शोधग्रन्थहरूको नाम निर्देश मात्रै गरिएको छ। ईसा हिन्दू हो भन्नुमा कतिपय प्रमाण यी पनि छन्–फ्लोरेन्समा ईसाकी आमा मेरियमको मूर्ति राखिएको छ। ‘मेक्समिलन’ गिर्जाघरमा पनि त्यही मूर्ति राखिएको छ। मूर्ति निश्चित नै मेरियमकै हो। तर ती ईसाकी आमा मेरियमको मूर्ति दुवै गिर्जा घरमा हिन्दू रानी महारानीजस्ती साडी, गुन्यू लगाएको छ। अनि मस्तकमा हिन्दूहरूले लाउने कुमकुमको टीका लगाएको छ। त्यस्तै प्रकारले ईसाको पनि ठाउँठाउँमा चित्र तथा मूर्तिहरू राखिएका छन्। म्युनिकको चित्र घरमा टाँगिएको चित्रमा पनि ईसा सन्न्यासी महात्माको वेशमा छ। अनि मस्तकमा तिलक पनि लगाएको छ। फ्लोरेन्सको मूर्तिमा ईसाले यज्ञोपवीत जनै धारण गरेको छ। यस सम्बन्धका गंगाशंकर एम.ए.ो ‘भक्ति भी विदेशियों के देन’ भक्ति अंक कल्याण गोरखपुरबाट प्रकाशित र डा. नोटोविच र माथि लेखिएका सबै विद्वान्हरूका ग्रन्थ मनन गर्न योग्य छन्। ईसाको एउटा चित्र रोमको पोप धर्मगुरुको वैटिकन राजमहलमा पनि छ। त्यस चित्रमा ईसाको मस्तकमा टुप्पी र धोती लगाएको साधु वेशमा छ।
Posted in Many More, Motivational, Religion
Posted on 16 Aug 2017 31 Dec 2017 by Chakra Bhandari
नागपञ्चमीसम्बन्धी प्रचलित कथा
काठमाडौं, १२ साउन — शुक्रवार नागपञ्चमी परेको छ । यस वर्षको नागपञ्चमीमै जनै पूर्णिमा र रक्षाबन्धन पनि परेको छ ।
नागपञ्चमीका बारेमा प्रचलनमा रहेका दुईवटा कथाहरू हामी यहाँ बताउँदैछौं ।
एक राजाका सात पुत्र थिए । उनीहरू सबैको विवाह भइसकेको थियो । तीमध्ये ६ वटा छोराका सन्तान भइसकेका थिए । कान्छो छोरोको चाहिँ सन्तान भएको थिएन । कान्छी बुहारीलाई जेठानीहरूले बाँझी भन्दै गिज्याउँथे ।
सन्तान नभएको दुःखमा परेकी उनी सासू, नन्द र जेठानीहरूको व्यंग्यवाण सहन नसकेर धुरुधुरु रुन्थिन् । उनका पतिले सम्झाउँथे, ‘सन्तान हुनु नहुनु भाग्यको अधीनमा छ । किन दुःखी हुन्छौ ?’
उनी भन्थिन्, ‘सबैजना मलाई बाँझी भनेर जिस्काउँछन् ।’
पतिले भने, ‘संसारले त अनेक कुरा गर्छ नि । मैले तिमीलाई कहिल्यै कठोर वचन गरेको छैन क्यारे । तिमी मलाई ध्यान देऊ र तनाव नलिऊ ।’
पतिको कुरा सुनेर उनलाई सान्त्वना प्राप्त हुन्थ्यो । तर कसैले वचन लगाउँदा उनी रुन्थिन् ।
त्यसपछि उनले पाँचवटा नाग देखेको भएर पाँचै नागको आकृति बनाएर पूजा गरिन् । नागहरूलाई चिसो खानेकुरा मन पर्ने भएकाले उनले काँचो दूध चढाइन् ।
यसरी नागलाई पूजा गरेको नौ महिनापछि उनलाई सन्तानलाभ भयो ।
कुनै गाउँमा एक किसान परिवार बस्थ्यो । किसानका दुई छोरा र एक छोरी थिए । एक दिन किसानले हलो जोत्दाखेरी नागका तीन बच्चाहरू त्यसमा किचिएर मरे ।
नागिनले पहिला त धेरै विलाप गरिन् अनि पछि आफ्नो सन्तानको हत्या गर्ने व्यक्तिसँग बदला लिने संकल्प गरिन् ।
राति आएर नागिनले किसान, उसकी पत्नी र दुवै छोरालाई डसिन् । छोरी चाहिँ मामाघर गएकीले बचिन् ।
भोलिपल्ट हल्लाखल्ला भएपछि मामाघरबाट छोरी आइन् । नागिन पनि उनलाई डस्नका लागि त्यहाँ आइपुगिन् । नागिनलाई देखेर छोरीले दूधको कचौरा अघि राखेर क्षमाप्रार्थना गरिन् ।
पशुबलि बारे हिन्दु धर्मग्रन्थमा के छ?
Posted on 26 Jul 2017 by Chakra Bhandari
-डा. गोविन्द टण्डन-
पशुबलि नेपाली समाजमा निकै जरा गाडेर बसेको छ। पूजा भन्यो कि कतिपय नेपालीको मनमा पशुबलिको दृश्य आइहाल्छ। यसैलाई धर्म, कर्म, पुरुषार्थ गरेको सम्झने परिपाटीले गर्दा धर्मको शीष्टस्वरुप विलुप बन्ने दिशातिर अग्रसर हुँदै गइरहेको प्रति धेरै मानिस अनभिज्ञ हुन सक्छन्। यसबारे अहिलेदेखि मात्रै होइन, प्राचीन कालदेखि नै विभिन्न तर्कवितर्क चलेको एव‌ं आआफ्नै धारणा रहेको सन्दर्भमा त्यसको औचित्य र अनौचित्य के छ त्यसबारे शालीन विमर्श बढाउँदै लग्नु जरुरी भइसकेको छ। घरको परम्परा र समाजले गर्दै आएको जुनसुकै संस्कार चाहे त्यो राम्रो होस् वा नराम्रो आँखा चिम्लेर संस्कृति भनेर अङ्गाल्ने गलत प्रवृत्ति हामीमा छ। संसारमा रहेका कुनै पनि धर्मका मूलग्रन्थहरुको सूक्ष्म अध्ययन, अवलोकन र निदिध्यासन गर्ने हो भने तिनले सबै प्राणीमाथि दया, करुणा, मायाकै लागि सदा प्रेरित गरिरहेको पाइन्छ। पछि गएर चाहिँ आआफ्नो स्वार्थ र चाहना अनुसार तिनको व्याख्यालाई आफ्नो अनुकूलको बनाउने प्रयासले अनेकन् भ्रम र अपव्याख्या गरिएको देखिन्छ। यो कुनै निश्चित धर्मको धर्मग्रन्थमा मात्र होला भन्ने होइन, अधिकांश धर्मग्रन्थमा यस्तै गरिएको छ, यस्तै भएको छ। शास्त्रको नाम दिएर धूर्त पाखण्डीहरुले आफू अनुकूलका व्याख्या गरेर शास्त्रलाई दुषित बनाएका छन्।
यो स‍ंसार मानिसको मात्र होइन, सृष्टिका सबै पशुप्राणीहरुको पनि हो। त्यसैले वेद भन्छ पशून् पाहि मां हिंसात् अर्थात् कुनै पनि पशुप्राणीको हत्या गर्नु हुँदैन। स्कन्द पुराणमा स्पष्ट पार्दै भनिएको छ
कर्मणा च तथा वाचा तत् एतां समाचरेत।। (स्कन्दपुराण ६। २३४। १९)
अर्थात् धर्मको मूल अहिंसा हो। त्यो अहिंसा धर्मलाई मनले खुब चिन्तन गरी विचार गर्नु। पुनः यो अहिंसा धर्मलाई कर्मले र वचनले सम्यक आचरण गर्नुपर्छ।
पूजाउपासनाको निहुँमा अबोध प्राणीको हिंसा गर्नु मातृस्वरुप, न्यायस्वरुप, वात्सल्यस्वरुप एव‌ं शक्तिस्वरुप देवीदेवताको घोर अपमान होइन ? आफूमा भएका वा जगतमा भएका काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जस्ता दुर्गुणहरुलाई जस्ताको तस्तै राखी बिचरा ती ईश्वरका लाटासुधा, निरीह, अबोध प्राणीहरुमाथि खुँडा, खुकुरी, तरबार, चुप्पी र अन्य के के हो के के हतियार चलाउनु मूढता होइन ? कायरता होइन ?
अन्याय, अत्याचार र आसुरी भाव एवं हिंसक वृत्तिलाई नष्ट गरी दीनहीनजनको रक्षा गर्ने जसको संकल्प छ उनै ईश्वरको नाममा अबोध, अबुझ प्राणीमाथि खुँडा र खुकुरी चलाउनु के धर्मसम्मत कुरा होला ? यो त वात्सल्यकै घोर अपमान भएन ? के यस्तो भक्ति हुनसक्ला ? के यस्ता प्रकारको आसुरी पूजाले देवीदेवता खुसी होलान् भन्ने सम्झने ! के कुनै छोराछोरीको हत्या आमाबाबुले आफ्नै सामु भएको देख्न सक्लान् या चाहलान् ? सोच्दा मात्र पनि जीउ सिरिङ्ग गर्छ। तैपनि कतिपय मानिसहरु यसैलाई अनमोल धर्म, संस्कृति, परम्परा र संस्कार सम्झेर रमाइरहेका हुन्छन्। बिना चेतना यस्तो घोर अन्धकारबाट मानिस बाहिर निस्कन सक्दैन।
हिन्दू धर्मशास्त्रहरुकै कुरा गर्ने हो भने परोपकार, दया, करुणा, सेवा, अहिंसा आदि गुणलाई मनुष्यको भुषण तथा मोक्षको आधार मानिएको छ। धर्मशास्त्रहरुमा यस्ता मन्त्रसमान् वचनहरु छन् कि तिनको सामान्य बोध र चेतले पनि मानिसलाई मनुष्य बनाउने क्षमता राख्छ।
परोपरकार सतां विभूतयः
परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्
ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः
यस्ता अनेक आदर्शवाणी छन् जसको सामान्य अनुसरण मात्रै गर्नाले पनि मानिसमा आत्मचेतना जागृति हुन बेर लाग्देन।
प्रसिद्ध ग्रन्थ महाभारतमा हिंसा, हत्या याग्ने तथा मासु नखाने मानिसलाई ठूलो पुण्य प्राप्त हुने कुरा बताइएको छ-
अर्थात् “लाखौँ खर्च गरेर सय वर्षसम्म अश्वमेध यज्ञ गरेको फल हिंसा हत्या त्यागे र मासु नखाए बराबरी हुन्छ भनिएको छ।” यसबाट हिंसामुक्त जीवनको महत्तालाई बुझ्न सघाउ पुर्‍याउँछ।
पद्मपुराणको पद्मोतर खण्डमा भगवान् शिव र पार्वतीबीच स‍ंवादको प्रसंगमा भनिएको छ- हे श‌ंकर, स्वयं फलको इच्छाले अज्ञानान्धकारको कारण मेरो नामले विभिन्न प्रकारको जीवहरुको जसले मारकाट गर्छ, त्यसको राज्य, व‌ंश, सम्पति, ज्ञान, स्त्री समस्त ऐश्वर्य केही समयमा नै नष्ट हुन्छ। त्यसो व्यक्ति मृत्युपश्चात् नरकमा जान्छ।
हुन पनि हो, कसैलाई मार्नु काट्नु हिंसा गर्नु धर्म हुने हो भने अधर्म भनेको चाहिँ के हुने होला ? पाप भनेको के होला ?
दशैँलाई साधनाको पर्व, आफूमाथि विजय गर्ने अनुपम पर्व, पारस्परिक सदभाव र सम्मानको पर्वको रुपमा विकसित गर्दै लाने हो भने यसको नाममा हुने गरेको पशुबलिको कलंकलाई मेटाउन चेतना बढाउँदै लग्नु नितान्त आवश्यक छ। (गोरखापत्र, कात्तिक १, २०६९)